Coreboot 4.14 inouya nekutsigirwa kunatsurudzwa kweIntel, rutsigiro rwemamwe mabhodhi uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Coreboot 4.14 inosvika pamwe nekutsigirwa kunatsurudzwa kweIntel, rutsigiro rwemamwe mabhodhi uye nezvimwe
Kuburitswa kweshanduro nyowani kuchangobva kuziviswa yepurojekiti CoreBoot 4.14 umo ma 215 vagadziri vakaita 3660 zvisimbiso zvitsva.
Mune iyi vhezheni itsva kunatsiridza kunoitwa kune mamaboard, kumachipsets, kune zvakajairika kuvaka pakati pezvimwe zvinhu.
1 Main nyowani maficha eCoreboot 4.14
Main nyowani maficha eCoreboot 4.14
Mune ino vhezheni nyowani ye coreboot 4.14 zvinoratidzwa kuti iyo kutanga rutsigiro rwe AMD Cezanne APUs uye paive nekugadziriswazve kwese kwekodhi kutsigira AMD SoCs, kuwedzera kune yakajairwa kodhi ye AMD SoCs kuve yakabatana, zvichiita kuti zvikwanise kushandisa izvo zvinhu zvave kutowanikwa zvePicasso SoC mune kodhi ye AMD Cezanne.
Izvo zvinoonekwa zvakare kuti rutsigiro rwechipiri uye rwechitatu chizvarwa Intel Xeon Scalable (Xeon-SP) server processor, SkyLake-SP (SKX-SP) uye CooperLake-SP (CPX-SP), yakagadzika uye inozivikanwa seyakagadzirira kuenda. zvigadzirwa zvekugadzira.
SKX-SP inoshandiswa kutsigira OCP TiogaPass mamaboards, uye CPX-SP inoshandiswa kutsigira OCP DeltaLake, seyakagadziridzwa uye yakabatana kodhi kodhi kutsigira akasiyana mazera eXeon-SP.
Nezve rutsigiro rwakawedzerwa, tinogona kuwana kuti rutsigiro rwakawedzerwa rwema mama mamaira makumi mana nemaviri, makumi maviri nemashanu acho anoshandiswa mumidziyo ine Chrome OS kana Google server:
Intel Alderlake-M RVP
Intel Alderlake-M RVP ine Chrome EC
Intel Elkhartlake LPDDR4x CRB
Intel Gomo reMimvuri
Kuchena Librem 14
Tsigiro yeIntel Cannonlake U LPDDR4 RVP, Intel Cannonlake U LPDDR4 RVP, neGoogle Boldar mamaboards abviswa.
Yepakati ACPI GNVS hurongwa hwakaunzwa, yakashandiswa panzvimbo pevatongi APM_CNT_GNVS_UDPATE SMI uye ikozvino inoshandiswa kutanga zvinhu zvakajairika zvematafura e ACPI GNVS. Kuwedzera kune iyo static saizi C_ENV_BOOTBLOCK_SIZE yakabviswa zvakanyanya ichifarira iro rine simba rekugovaniswa, kunyangwe ichitaura kuti Kconfig ichiripo kuti ishandiswe sehukuru hwakamisikidzwa uye kumisikidza yakakwira yakasarudzwa machipisi.
Zvikamu zveLinker izvozvi zvakarongedzwa pamusoro kudzikisira tsoka dzekutsika uye chengetedza padyo kusvetuka zvinodiwa kubva ku reset vector.
Izvo zvakare zvataurwa kuti iyo CBFS faira system fomati yakashandurwa yaishandiswa kutora zvinhu zveCoreboot muFlash. Shanduko dzakaratidza kugadzirira kwekuitwa kwesimba rekupupurira mafaera ega nemasiginecha edhijitari.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kubvunza iwo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Coreboot 4.14 inosvika pamwe nekutsigirwa kunatsurudzwa kweIntel, rutsigiro rwemamwe mabhodhi uye nezvimwe
Netsoka dzako pasi: zvakakwana kutaura kuti Linux yakakwana, zvirinani kumimhanzi, uye ngatiregei kutaura GarageBand zvakare